OITNB ရာသီ ၆။ လော်ရာပရက်ပွန်သည်ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်သုံးခုမှမရှိခြင်း - Netflix သတင်း
OITNB ရာသီ ၆။ လော်ရာပရက်ပွန်သည်ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်များတွင်ဘာကြောင့်မရှိခဲ့သနည်း
Oitnb Season6Why Laura Prepon Was Absent From First Episodes
Orange Is the New Black ရာသီ6- Credit: JoJo Whilden / Netflix
အရှက်မရှိသောရာသီ 10 netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
အဆိုပါရုံး၏သွန်း: သူတို့ယခုအဘယ်မှာရှိသနည်း သံလက်သီးရာသီ ၂ - Moon Knight ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Alex Vause ခေါ် Laura Prepon သည်အဘယ်ကြောင့်လိမ္မော်ရောင်၏ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်သုံးခုမှာ New Black ရာသီ ၆ ဖြစ်သနည်း။
လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအကုန် Netflix တွင်ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီ (၆) ရာသီသည် Alex Vause (Laura Prepon) ရာသီ၏ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ရပ်သုံးခုတွင်မရှိသောအခါပရိသတ်များကသူမအသွင်သွင်ပြင်ထွက်ပေါ်လာမလားဟုတွေးမိသည်။
နောက်ဆုံးတွင်အဲလက်စ်သည်ပြသနာများစွာနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ပရိသတ်များအနေဖြင့်အဲလက်စ်သည်ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်လေးခုတွင်အဘယ်ကြောင့်မရှိရသနည်းဟုတွေးနေကြဆဲဖြစ်သည်၊ ယခုဟောလီးဝုဒ်သတင်းထောက်၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသိနေကြသည်။
အစီရင်ခံစာအရ Prepon သည်သူမ၏သမီးအဲလာကိုမွေးဖွားပြီးနောက်ရာသီ၏ပထမဖြစ်ရပ်လေးခုရိုက်ကူးရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင်မှုဖြင့်အယ်လာသည်ရာသီသစ်စတင်ရိုက်ကူးသည့်နေ့တွင်ပင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
TRENDING - လိမ္မော်ရောင်သည် Netflix တွင် New Black ရာသီ ၇ ရက်ဖြန့်ချိသည့်နေ့ဖြစ်သည်
ဂျနီဖာ Kohan နှင့်စာရေးဆရာများအဲလက်စ်အကြောင်းကိုအချို့သောနက်နဲသောအရာဖန်တီးရန်နည်းလမ်းထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ THR လည်း Prepon ရဲ့ကိုယ်ဝန်နှင့်ပြပွဲကနေချိုးပြပွဲရဲ့အားသာချက်မှအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့သည်
အလိုတော်ရာသီ5Bates မိုတယ် Netflix အပေါ်ဖြစ်သည့်အခါ
Netflix နှင့်ပြပွဲရာသီသစ်ကိုသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အဲလက်စ်ရဲ့မရှိခြင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပရိသတ်များကအွန်လိုင်းရှိအချို့သောဖန်တီးမှုများကိုဖန်တီးပေးသည့်လက်ဖက်ရည်ဇာတ်ကားများ၊ နောက်တွဲယာဉ်များသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများတွင်ဇာတ်ကောင်ကိုမတွေ့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, ပြပွဲ၏ကြယ်တစ် ဦး အဖြစ်, Prepon အဲလက်စ်အဖြစ်ပြန်လာခဲ့ရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ငါဖန်တီးကြံစည်မှုနှင့်ပယောဂရာသီရာသီအတွက်တကယ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာသိသာရာသီသစ်၌အသစ်သောအထွto်မှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သောအဲလက်စ်နှင့် Piper ရဲ့ဆက်ဆံရေး, တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားပြောင်းလဲနေသောကဆက်ပြောသည်။
အဲလက်စ်နောက်ဆုံးစတုတ္ထဇာတ်လမ်းတွဲ၌ပေါ်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ပရိသတ်များနှင့်စီးရီးတစ်ခုလုံးအတွက်လန်းဆန်းစေသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ အဲလက်စ်နှင့် Piper ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာရာသီကျော်, ကောင်းစွာ, ပြhasနာဖြစ်ခဲ့သည်နေစဉ်, ဒီအတူတူရှေ့ဆက်ရွေ့လျားကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရှင်းနေသည်မှာဤဇာတ်ကောင်များသည်အတူတူ ပို၍ ပျော်ရွှင်ကြပြီး၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံမှောင်မိုက်။ ခက်ခဲသောအကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြပွဲကိုကူညီသည်။
မင်းဘယ်လိုဘယ်လိုစဉ်းစားခဲ့တာလဲ OITNB ရာသီ6အဲလက်စ်ရဲ့မရှိခြင်းကိုင်တွယ်? သင်ဒါကိုကြိုက်လား? သူတို့ကသူတို့မတူတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်ပေးချင်ပါသလား ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ!
နောက်တစ်ခု:OITNB နှင့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀
လိမ္မော်ရောင်သစ်ကိုအနက်ရောင်ရာသီ5ဇာတ်လမ်းတွဲ7ပြန်လည်စုစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်
netflix အပေါ် insatiable ရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ရုပ်ရှင်2ထွက်လာမယ့်အေးခဲနေသည်အခါ